Madaxweynaha Puntland oo Yuusuf Xaaji Nuur u magacaabay guddoomiyaha maxkamada sare ee Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo Yuusuf Xaaji Nuur u magacaabay guddoomiyaha maxkamada sare ee Puntland
Madaxweynaha Puntland oo Yuusuf Xaaji Nuur u magacaabay guddoomiyaha maxkamada sare ee Puntland
August 16, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Yuusuf Xaaji Nuur.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa magacaabay guddoomiyaha maxkamada sare ee dowlada Puntland.
Madaxweynaha ayaa u magacaabay Yuusuf Xaaji Nuur guddoomiyaha cusub ee maxkamada sare ee dowlada Puntland, sida ku qoran digreeto kasoo baxday madaxtooyada Puntland oo warsidaha Puntland Mirror uu arkay.
Yuusuf Xaaji Nuur ayaa ah garsoore Soomaaliyeed oo xirfadle ah. Wuxuu dib ugu noqonayaa xilkiisii uu hayay sanadkii 2001, markaasoo gobolka uu wajahay colaad sokeeye oo u dhaxaysay madaxweynihii hore Cabdulaahi Yuusuf Axmed iyo kooxo mucaarad ahaa.
Bishii July kowdeedii ee sanadkii 2001-dii, ayaa Yuusuf Xaaji Nuur wuxuu iclaamiyay inuu yahay madaxweynaha kumeel gaarka ah ee Puntland kadib markii uu dhamaaday wakhtigii Madaxweyne Yuusuf. Laakiin si kastoo ay ahaataba, Cabdulaahi Yuusuf waa uu diiday iclaamintii Yuusuf Xaaji, wuxuuna ku adkaystay inuu isagu yahay madaxweynaha saxda ah, taasoo gobolada Puntland u horseeday labo sanno oo dagaalo sokeeye ah.
Madaxweyne Cabdiweli ayaa sidoo kale magacaabay afar xubnood oo katirsan maxkamada sare ee Puntland.
Mogadishu-(Puntland Mirror) Former Permanent Secretary at the Somali Ministry of Interior Yahye Ali Ibrahim handed over office to new secretary Abdullahi Mohamoud Hassan. Yahye handed over the documents of the office to his successor Abdullahi [...]
Burundi oo kordhisay waajibaadka ciidamadeeda ku sugan gudaha Soomaaliya
Bujumbura-(Puntland Mirror) Burundi iyo Guddiga Nabada iyo Ammaanka Midowga Afrika ayaa saxiixday heshiis lagu cusaybsiinayo waajibaadka ciidamada Burundi ee gudaha Soomaaliya, sida ay sheegeen Midowga Afrika maanta oo Jimce ah. Heshiiska ayaa imaanaya labo bilood [...]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Taliye ku xigeenkii ciidamada booliiska Puntland Jaamac Saxardiid ayaa geeriyooday hal maalin kadib markii dhaawac toogasho uu caloosha iyo xabadka kasoo gaaray xilli uu lugeynayay magaalada Boosaaso, sida ay Puntland Mirror u xaqiijiyeen [...]